Al-Shabaab oo sida la sheegay la wareegtay Idaacad ku taalla Afgooye - Sabahionline.com
Al-Shabaab oo sida la sheegay la wareegtay Idaacad ku taalla Afgooye Jannaayo 20, 2012
Dagaalyahaniinta Al-Shabaab ayaa sida la sheegay la wareegay idaacadda madaxa bannaan ee Raadiyow Afgooye, iyagoo qabsaday qalabkii afduubayna weriye raadiyaha u shaqaynayeyt oo la yiraahdo Ayuub Yuusuf Dalmar, IT News Africa ayaa weriyey Khamiistii (19-ka January). Qodobbo la xiriira
Tuulo Jibuuti ku taal oo deeq cunto ah heshay ka dib abaar ku dhufatay
Barnaamijka QM ee Hourmarinta iyo Jabuuti oo ku heshiiyay in ay gargaar ka gaystaan abaarta
Dadka deggan degmada Afgooye oo ku nool agaggaarka idaacadda gaarka loo lahaa ayaa sheegay in laga yaabo in ay al-Shabaab saldhigga u bartilmaameedsadeen ra’yiga idaacadda oo kooxda ka soo horjeeda, sida ay jariidaddu werisay. Bilihii dhawaa ee la soo dhaafay, al-Shabaab waxay dadka deggan Afgooye oo 30 KM koofurta Muqdisho ku taalla ku soo rogayeen amarro xakamayn ah. Bishii ina dhaaftay, kooxda mayalka adag ayaa ku amray in ay macallimiinta diintu joojiyaan casharrada ay dugsiyada ka bixinayeen si ay macallimiintu u xaadiraan seminar ku saabsan “qiimaha ruuxiga ah ee jihaadka”, sida ay sheegtay jariidaddu. Maamulka Raadiyow Afgooye iyo al-Shabaab midkoodna weli dhacdadaa kama aanu faalloon. Muxuu kula yahay qoraalkan?